"Heverinay ho corona io raha vao mitovitovy satria tsy manao test izahay" - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ahoana ny fandraisan’ny marary tonga eto aminareo ny fahafantarany fa voan’ny coronavirus izy?
Izahay moa izany tsy afaka miteny hoe coronavirus na tsia satria tsy mbola nanao test ny marary. Fa ny fitrangany fotsiny no tahaka ireny voan’ny gripa ireny. Marary an-doha, manakotsako ny vanintaolana, malain-komana, tsy maheno fofona, tsy maheno tsiron-kanina, tsy tia sakafo mihitsy, indraindray misy mivalana. Tahaka izany ihany ny fitrangan’ny gripa tsotra, fa izahay moa tonga dia manome ny fitsaboana.
Entanina ny olona hamonjy dokotera raha vao misy tranga hafahafa tahaka ireo voalaza etsy ambony ireo. Tsy asaina milahatra intsony fa tonga dia manatona dokotera mba tonga dia hahazo fitsaboana malakilaky, sy tsy efa tonga amin’ny fahasarotana na ilay lazaina hoe forme grave vao hanatona ny dokotera satria raha izay dia tsy aty amin’ny csb intsony no mandray azy fa any amin’ny hopitaly. Ny fotoana tokony efa handraisan’ny dokotera dia tsy tokony holaniana amin’ny filaharana intsony.
Tahina Zohasina Ratsimanohitra, Chef de division Coordination des Structures et Planification, Service Economie, Région Boeny
Manao ahoana ny valanaretina Coronavirus any amin’ny faritra misy anareo?
Iray volana lasa izay, mbola tsy nisy olona voan’ny coronavirus teto Mahajanga. Indrisy anefa fa tato ho ato, nanomboka ny volana jolay teo dia nirongatra ny aretina. 25 ao anatin’ny fokontany miisa 26 no misy coronavirus raha ny eto Mahajanga manokana no resahana, efa misy olona 7 no maty tao anatin'izay fotoana izay . Hatraminy 2 aogositra teo dia efa nahatratra 210 no cas positifs, olona 133 no manaraka fitsaboana,70 no sitrana, 5 no ao anatin’ny forme grave.
Manao ahoana ny fifehezana sy ny fitsaboana ireo olona voan'ny coronavirus?
Mbola miady mafy mihitsy amin’ny fifehezana ny valanaretina satria mbola sarotra amin'ny olona ny manaraka ny fepetra. Eo ny fitangoronana, noho ny fahasahiranana sy ny fitadiavana ny vola. Na izany aza dia efa zatra kosa ny olona amin’ny fampiasana ny aron-tava. Tena efa mandray andraikitra tokoa moa ny mpitondra fanjakana aty an-toerana amin’ny famoahana ny fepetra maro samihafa toy ny famerana ny fivezivezen'olona. Efa voafetra ny ora fiasana na ho an’ny miankina na ho an’ny tsy miankina amin’ny fanjakana. Ny fisokafan’ny toeram-pivarotana samihafa ankoatra ny toeram-pivarotana fanafody, ny banky sy ny tobin-dasantsy. Efa mandeha tsara ny fitsaboana ireo olona voan’ny coronavirus na any amin’ny hopitaly (misy roa izy ireo dia ny hopitaly manara-penitra CHU Mahavoky Atsimo sy ny Hopitaly CHU Pzaga Androva ) na ny any an-trano .